Hutano mazano - Bezzia | Bezzia
Sezvatakaratidza, hutano ndiko kusavapo kwezvirwere uye kugona kwehutano hwemagariro, hwepfungwa uye hwepanyama. Ndokusaka kubva kuBezzia, tinoda kukupa rairo yezvehutano kuti uite zvinangwa izvi uye edza kutara matanho ekukuratidza nzira.
Kuwedzera kune ruzivo nezvechikafu, zvinokuvadza zvezvimwe zviitiko kana maitiro ekudzidzira mitambo nemazvo, isu tichaisa pfungwa pakukupa iwe madhairekitori ekuchinja maitiro uye kutevedzera tsika dzakanaka.
Muchikamu chino pa utano hwehutano Isu tinoshuvira kukupa iwe gwara rekuzvichengeta uye kuzvichengeta uri mune yakanaka mamiriro.
5 matipi ekurwisa kushaya hope
kubudikidza Toñy Torres inoita 2 mazuva .
Kushaya hope ndiko kumwe kunowanzoitika kusagadzikana munyika yanhasi, dambudziko rinobata zvakanyanya ...
Zvinhu zvishanu zvipikiri zvako zvinotaura nezve hutano hwako
kubudikidza Toñy Torres inoita 4 mazuva .
Zvipikiri zvinotaura zvinhu zvakawanda nezve hutano hwako uye chimiro chadzo, magadzirirwo kana ruvara, zvinogona kuve zviratidzo zvekushomeka uye ...
Zvirwere zvakajairika muzhizha uye maitiro ekuzvidzivirira
Kana zhizha rasvika, huwandu hwakawanda hwetsika hunovhiringidzwa, chikafu chinoshanduka maererano nemafomu uye zvirongwa, ...
Hutano mhedzisiro yekufona, maitiro ekuzvidzivirira
kubudikidza Toñy Torres inoita 6 mazuva .
Teleworking iri pano kuti igare, zvirinani ikozvino. Kunyangwe hachisi chinhu chakanyatso nyowani, yatove ...
Natural mishonga yekurapa aphonia kumba
Mhepo kutonhodza kana kudziyisa, kumesa izwi rako, kutaura kwenguva refu kubasa, ndiwo mamwe ...
Izvo zvina zvine njodzi chikafu chezhizha
Kumwe kudya kunogona kuve nengozi muzhizha uye zvikanganiso zvidiki uye zvisina njodzi zvinogona kukonzera matambudziko akakomba ehutano…
Chii chinonzi Buffalo Hump uye maitiro ekuibvisa
Nezera muviri unoshanduka, dzimwe nguva usingadzoreke uye pamusoro pezvose, usingatombo cherekedza ...
Sunbathing nhumbu: ehe kana kwete?
Ndinogona here kuzuva zuva nepamuviri? Ndiimwe yemibvunzo yakajairika kune vanamai vamangwana. Naizvozvo, hapana chakaita ...
Dry eye syndrome, zviratidzo uye kurapwa
kubudikidza Toñy Torres inoita Mavhiki e3 .
Dry eye syndrome chirwere chinobata vanhu vazhinji, ivo vasingazive ...
6 mabhenefiti ekunwa mandimu mvura zuva rega rega
Iwe unoziva zvese zvakanakira kunwa mvura yemononi zuva rega rega? Iyi tsika yakajairika, kunyangwe yakawanda ...
Sei mabunoni achibuda
kubudikidza Susana godoy inoita Mavhiki e3 .
Kana iwe wakambotambura kana kutambura navo, saka zvirokwazvo une chikonzero chekuziva kuti nei mabunoni achibuda….
MaMoles, ndirini patinofanira kuvhunduka?
Mishonga yenyukireya, ndeyei uye ndeyei